Momba anay | Beyin fonosana | orinasa mpanamboatra kitapo sakafo
Kazuo Beyin Paper sy Plastic Packing Co., Ltd. izay teo alohany dia Xiongxian Juren Paper sy Plastic Packing Co., Ltd, dia naorina tamin'ny taona 1998 tany am-piandohana. Tsy nanana tsipika famokarana manokana izahay tamin'izany fotoana izany, afa-tsy manao varotra ihany. Rehefa mandeha ny fotoana, dia hitanay fa tena sarotra ny manome antoka ny kalitao sy ny fotoana famokarana raha tsy manana ny ozininay manokana izahay. Avy eo dia nanapa-kevitra ny hanangana ny tsipika manokana izahay. Niezaka sy tsy nahomby imbetsaka izahay, tojo olana maro izahay, rehefa manonta, ny loko tsy mety foana izay ilainay; Rehefa misakafo izahay, dia miketrona foana ny fitaovana; Rehefa manapaka izahay, dia mivadika hatrany ny kitapo , Nefa tsy nilavo lefona velively izahay ary farany nahomby tamin'ny fitsapana an'arivony maro. Farany afaka manome kitapo tonga lafatra ho an'ny mpanjifanay izahay.
Taorian'ny fivoaran'ny 20 taona mahery, ankehitriny ny fonosana Beyin dia novolavolaina ho amin'ny orinasa mpamokatra iray izay manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sy famokarana kitapo fonosana malefaka. Mahatratra 60 tapitrisa RMB isan-taona ny fahafahan'ny famokarana; Atrikasa 7 natsangana niaraka tamina fitaovana 50 mitarika indostrialy napetraka. Toy ny: milina fanontana miloko 9, milina haingam-pandeha haingam-pandeha ary milina fandrakofana horonan-tsary, milina fizarana sy fanapahana, milina fanaovana lafaoro ary milina fanaovana kitapo hafa. Misaotra ireo andalana famokarana mialoha ireo, afaka nifanena tamin'ny mpanjifa fitaovana, famolavolana ary fanontam-pirinty samy hafa izahay.
Misy mihoatra ny 100 ny mpiasa miasa ao Beyin fonosana, 50 amin'izy ireo no teknisianina matihanina manana mari-pahaizana fanontana pirinty, teknisiana zokiolona 10 efa mandray indostrian'ny fonosana mandritra ny 10 taona. Ireo mpiasa manana traikefa manan-karena dia manome fahafaham-po tanteraka ny fangatahan'ny mpanjifa rehetra.
Ankoatr'izay, mihoatra ny 30 ny varotra tsara any Beyin Packing, izay hanampy ny mpanjifa hamaha ny olany. Ny fahafaham-pon'ny mpanjifa dia ny fanarahanay. Hanampy amin'ny famolavolana mpanjifa izahay, famokarana sy fandefasana entana, sns.
Mampanantena izahay fa hamaly ao anatin'ny 30mn mandritra ny andro, ary ao anatin'ny 8 ora mandritra ny alina. Vonona izahay hanampy amin'ny famahana ny olana, na inona na inona andoavanao na tsia amin'ny farany. 20 taona mahery, misy ny mpanjifa tsy dia mitaraina momba anay, ary afaka mampanantena izahay fa tsy hanenenanao ny nifidiananao anay.
Kazuo Beyin taratasy sy plastika fonosana Co., Ltd.
Ny orinasanay dia manolo-tena amin'ny fikarohana kitapo biodegradable
Ny fonosana Beyin izao dia efa orinasa matotra sy marin-toerana, tsy hadinonay mihitsy ny fomba ahafahantsika mivoatra haingana noho ny fanohanan'ny fiaraha-monina sy ny mpanjifantsika. Hiezaka mafy araka izay tratra izahay hamerina ny fiarahamonina.
Nanokana ny tenanay tamin'ny fikarohana momba ny kitapo voajanahary izahay ary manantena ny hampihena ny fako plastika eto an-tany. Niezaka nandritra ny taona maro izahay, ary tamin'ny farany dia nahita masterbatch avy amin'ny orinasa UK Welles izay azo ampiana ao anaty akora toy ny PE, BOPP, PET, sns. Manampy izahay hampahafantatra amin'ny olona maro kokoa sy hampiasa an'ity fitaovana ity fa tsy amin'ny plastika mahazatra manilika ny vidiny, satria manantena izahay fa afaka mitazona sy mahatadidy ny hakanton'ny tontolo iainantsika.
Fiaraha-miasa ho an'ny daholobe
Ankoatr'izay dia mikatsaka izay hahasoa ny besinimaro izahay. Nandeha tany geracomium imbetsaka izahay, ary misy lehilahy antitra manirery. Mino izahay fa, ny fiaraha-monina tsara dia tokony hamela ny antitra hanana olona hiankina aminy, ary vonona izahay hanome ny anjaranay.
Beyin fonosana dia orinasa mahay, tompon'andraikitra ary manana fo lehibe. Mifantoka amin'ny fampandrosoana maharitra izahay, mieritreritra ny fahafaham-pon'ny mpanjifa ary mikarakara ny fahasambaran'ny mpiasa.
Vonona ny hahalala bebe kokoa? Manomboha anio!
Tsy hadinonay mihitsy ny antony hanombohantsika, ka fantatray izay halehantsika!